Isikhwama se-Contingency: siyini nokuthi ungayakha kanjani ekhaya lakho | Ezezimali Zomnotho
Njengesimo sezomnotho sabaningi, kujwayelekile ukucabanga kakhulu "ngomqamelo", okusho ukuthi, wokonga ingxenye njengesikhwama esiphuthumayo noma isikhwama sezimo eziphuthumayo. Kepha uyazi ukuthi zombili azifani? Sisho ukuthini ngowesibili ke?
Uma uhlala usuku nosuku ngalokho okuholayo, noma welula lokho onakho ngangokunokwenzeka, kwesinye isikhathi ukukhipha okuthile ukuze ube nokonga okuthile kwemicimbi engalindelekile kungakwenza ulale kangcono kakhulu. Kepha, Kungaba yini isikhwama sezehlakalo? Futhi kungani ingafani naleyo ephuthumayo?
1 Siyini isikhwama sezimo eziphuthumayo
1.1 Umehluko phakathi kwesikhwama sezimo eziphuthumayo nesikhwama esiphuthumayo
2 Izinzuzo zokuba nesikhwama
3 Siphiwa kanjani isikhwama sezimo eziphuthumayo
4 Ungasakha kanjani isikhwama sezezimali
4.1 Hlela isabelomali
4.2 Nquma ukuthi ufuna ukonga malini
4.3 Yenza okufanayo njalo ngenyanga
Siyini isikhwama sezimo eziphuthumayo
Ake siqale ngokwazi ukuthi siyini isikhwama sezehlakalo. Kufanele wazi ukuthi lokhu kusho ukuba ne- inani elithile lemali okungafanele lithintwe ngaphandle kokuthi lixazulule izinkinga ezingalindelekile eze empilweni yakho. Isibonelo, kungahle kube ngenxa yengozi yemoto, lapho kufanele usebenzise leyo mali oyilondolozile ukulungisa imoto nokuyithola isebenza futhi; noma ukuthi uthole inhlawulo yomgwaqo futhi kufanele uyikhokhe ngosuku esekuhhafu ngayo.
Manje, esikushoyo kuwe kungenzeka ukuthi ukubiza ekhaya lakho (noma enkampanini) ngokuthi "isikhwama esiphuthumayo" kodwa, ingabe kuyefana ngempela? Kusukela manje siyaqhubeka sikutshela cha, bese sizochaza ukuthi kungani.
Umehluko phakathi kwesikhwama sezimo eziphuthumayo nesikhwama esiphuthumayo
Un isikhwama esiphuthumayo sisindisa usuku lwakho nosuku. Kuqukethe ukuba nenani elithile lemali eligciniwe uma kwenzeka kukhona okungalindelekile ekhaya lakho noma ebhizinisini, ukuze ungadingi ukuncika ebhange, uboleke imali noma wenze enye into ukuxazulula leyo nkinga.
Ungahle ucabange ukuthi kuyefana nesikhwama sezimo eziphuthumayo, kepha kukhona umehluko omkhulu ngaso. Futhi ingabe leyo Isikhwama sezimo eziphuthumayo sidinga inani elikhudlwana, ngoba yilokho obekungasetshenziswa «phendula» kunalokho «ezinkulu» izehlakalo, ngoba ziyabiza. Kodwa-ke, esimweni se- «eziphuthumayo», kungaba khona lezo zimo ezingalindelekile ezingacabangi ukuthi inani elikhulu, okuyizindleko ezingaphezulu «zansuku zonke» ngaphambi kwabanye.
Ngakho-ke, bobabili bayafana, kepha ngasikhathi sinye inhloso abanayo ayifani. Ngenkathi eyodwa ingezindleko ezidingekayo ezingabizi kakhulu, esimweni sesikhwama sezimo eziphuthumayo ibizonakekela ezinkulu (yingakho isibalo esigciniwe kufanele sibe ngaphezulu kakhulu).
Izinzuzo zokuba nesikhwama
Siyazi. Kungaba nzima ukudala isikhwama sezimo eziphuthumayo (ngisho nangaphezulu uma sikutshela ukuthi nawe wenza isikhwama esiphuthumayo). Futhi kunezinzuzo eziningi ezingakwenza uthathe isinqumo sokulawula izindleko bese wonga. Ngoba, phakathi kwezinzuzo ozozithola, kukhona okulandelayo:
Ukuthula okukhulu kwengqondo. Ukwazi ukuthi unemali oyilondolozile, noma ungayisebenzisi, kuyakusiza, futhi okuningi, ukugcina ingcindezi ikhona. Uyazi ukuthi uma kwenzeka okuthile, uzokwazi ukubhekana nakho, ngokuphelele noma ngokwengxenye.
Uzokonga okuningi. Ngokuzola, ngenethiwekhi yezomnotho ekuxhasayo uma kwenzeka okuthile kuwe, uzofuna ukuthi kube kukhulu kakhulu. Ngamanye amagama, uzothuthukisa ukonga ngoba imicabango yakho ngeke isaba eyokuphila "usuku nosuku", kepha esikhundleni salokho "wokuphila nokonga okuncane", ikakhulukazi ngoba asazi ukuthi ikusasa lisiphatheleni.
Ungazithokozisa. Qaphela, ngokuhamba kwesikhathi. Ngoba njengoba ubeka imali, uma kungekho mcimbi ongalindelekile, leso sibalo siyakhuphuka futhi singase size kancane lapho isikhwama sezimo ezingaqondakali singahlukaniswa sibe yimali eyahlukene, noma sisebenzise ezinye ukwenza "izifiso", ngendlela yokuthi lapho umkhawulo kufinyelelwe ungayisebenzisa. Khumbula ukuthi akufanele uhlale ubeka imali ngaphandle kokujabulela ngezikhathi ezithile.
Siphiwa kanjani isikhwama sezimo eziphuthumayo
Akungabazeki ukuthi a Isikhwama sezimo eziphuthumayo singakhiwa kuphela ngemali onayo. Uma unomsebenzi, ngalokho okutholayo ekupheleni kwenyanga ngawo; uma unempesheni, kuyasiza ... okufanayo. Kepha, kufanele ngishiye amaphesenti amangaki ukuze nginikeze isikhwama?
Kulokhu, inani lizoya ngempilo yakho. Umuntu ohlala yedwa futhi onempesheni engakhokhi akafani nalowo onomndeni omkhulu lapho kusebenza oyedwa kuphela. Kepha noma ngabe ungonga kancane kangakanani, kubalulekile ukwenza njalo.
Ngakho-ke, ungathola inani elithile leholo, usizo noma izimpesheni, izinzuzo ezingalindelekile (ilotho, amafa, iminikelo, njll.) Ngamanye amagama, kunoma iyiphi imali engenayo ongayithola.
Ungasakha kanjani isikhwama sezezimali
Ukugxila manje kokusebenzisekayo, sizokhuluma nawe mayelana nokuthi ungasakha kanjani isikhwama sezimo eziphuthumayo. Lokhu kuzoxhomeka kakhulu kulokhu okungenhla, okusho ukuthi, uzoyinikeza kanjani (uzoyithathaphi imali yalesi sikhwama), ukuze ikhule kancane noma ngaphansi kuye ngokuthi ugcina ini.
Kepha, ukwenza lokhu, gcina okulandelayo engqondweni:
Kubalulekile ukuthi wazi ukuthi yiziphi izindleko nemali onayo ngenyanga. Kubhale phansi konke.
Manje, izindleko ezihlukile ezilungisiwe kulezo eziguqukayo (ukuthenga, ukuya ejimini, ukuphuma nabangani ...).
Cabanga ngalezozindleko, ingabe zonke zibalulekile noma ngabe ikhona enye ongayenza ngaphandle kwayo? Uma kunjalo, usuthatha isikhathi eside ukukuqeda.
Thola umehluko phakathi kwemali engenayo nezindleko. Ukuze inyanga ihambe kahle, udinga, okungenani, yonke into ukuthi ibe ku-0, okungukuthi, imali engenayo - izindleko zilingana no-zero, yize inhloso ukuthi kufanele ube nesibalo esihle.
Nquma ukuthi ufuna ukonga malini
Kusukela kuleyo nombolo evumayo, udinga setha iphesenti lokonga. Isibonelo, ake ucabange ukuthi kusukela emholweni, uma usuzikhokhile zonke izindleko, usalelwe ngama-euro ayikhulu. Ungakhetha ukonga ama-euro angama-100 esikhwameni sezimo eziphuthumayo nokunye okuse esikhwameni sezimo eziphuthumayo (ukuthenga izingubo, uma kunezindleko ezingalindelekile ekuthengeni, njll.) Futhi, uma ungazisebenzisi, ungakufaka ku isikhwama sezimo eziphuthumayo.
Leyo mali egcinwe esikhwameni sezimo eziphuthumayo akufanele ithintwe ngaphansi kwanoma yiziphi izimo. Uma kwenzeka kwenzeka isimo esidinga ukusisebenzisa njengomcimbi obucayi ongalindelwe. Njengoba nje ubona ukuthi ungonga, ngokuhamba kwesikhathi uzoba nemali ethe xaxa, futhi lokho kungasho umehluko phakathi kokukhungatheka nokukhululeka.
Yenza okufanayo njalo ngenyanga
Cha, akusilo ubuwula. Uma wenza lokhu njalo ngenyanga, ngabe wazi konke ongakusindisa? Ukuqhubeka nesibonelo esedlule, sama-euro angama-25 ngenyanga, uma sikuphindaphinda ngezinyanga eziyi-12 (ukuthi ngaphandle kokubala izinkokhelo ezengeziwe), sikhuluma ngama-euro angama-300. Yebo, kubonakala kukuncane. Kepha manje phindaphinda lelo nani ngeminyaka eyishumi. Uzoba nama-euro angama-10 kunoma yimuphi umcimbi ongalindelekile. Uma futhi ungabeka okunye okuthe xaxa kuleso sikhwama, kuzokusiza uzizwe ungcono kakhulu.
Indlela ephelele ye-athikili: Ezezimali Zomnotho » Ilondoloza » Ukuphela kwenyanga » Isikhwama sezimo eziphuthumayo